Emhlabeni, kukhona 7 izimangaliso zemvelo okungavamile. Bonke - kusukela Mount Everest e-Grand Canyon - kuyinto emehlweni umxhwele. Nokho, zikhona emhlabeni nezindawo kancane owaziwa, abakwaziyo ukusebenza futhi ndikindiki, ahlasela ngesihluku njengoba nje. Babukeka surreal ukuze, wokuba lapho kanye, ngeke bakholwe ukuthi ukhona iplanethi yakhe.
namathafa Mangalisayo ka Socotra, okubonakala sengathi kuvela kwenye indawo yonke. Rocks namawa yalesi siqhingi ngokuvamile kakhulu ngithuka izihlahla, kepha efaniswe amakhowe giant nge izigqoko oluhlaza nasemilenzeni obukhulu. ngemiboko yazo egeleza onsomi ubisi anenhlaka, okuyinto bendawo ngokuthi "igazi udrako". Lapho imbobo we cortex, ulandela futhi owavele osemanzi ukwakha amatshe yinqaba abomvu.
Danakil Ukucindezeleka, iTopiya Eritrea umngcele
ukushisa Okunzima Kakhulu Ukubhekana Nakho, amadamu lamafutha sulfuric acid, intuthu anobuthi nezintaba-mlilo iqhuma ukwenza Danakil ukucindezeleka yezindawo esiwugwadule kakhulu abantu. Hard ukukholelwa ukuthi emhlabeni, hhayi omunye izigidi amaplanethi ungahlalwa muntu.
Intaba Tianjie, China
Inkungu iphakama zimbozwe eliyingozi Tianjie nakanjani zifane namathafa ezisemkhathini. Baze baba sibonelo yezintaba elintantayo, eziqhingini iplanethi Pandora kusukela movie adumile "Avatar."
LikaGoliyathi Causeway, Northern Ireland
Ibhuloho ifomu giant mayelana 40 tysyach olunezinhlangothi basalt amakholomu oxhumene. Amazing alien landscape kwaba ngumphumela ukuqhuma kwentaba-mlilo zasendulo.
Ihlathi Dedvley, Namibia
Issushonnoe Afrika ukushisa Dedvley ubumba ithafa ugcwele efile zomtholo, efana amathambo. isikhala Ezinganyakazi nge Silhouettes black emincane sizungezwe izindunduma omkhulu ubukeka very scary.
Geopark Zhangye Zhangye Danxia National Geological Park, China
Rocky namathafa Zhangye Danxia National Geological Park, Pestryaev bonke imibala rainbow, kwamiswa abangaba yizigidi ezingu-27 zeminyaka ukuguguleka ngaphansi kwethonya sandstone abomvu.
Ezemfundo Rishat, Mauritania
Yaziwa nangokuthi ushukela Richat Eye ukwakheka kuyinto isakhiwo annular nobubanzi km 40. Kube nephutha emangalisayo anomaly zemvelo ngenxa ukuguguleka komhlabathi, kunokuba esiphuthumayo lokubikezela mkhathi alien, efana ngephutha abaningi bakholelwa.
New Zealand emhumeni sidilizwa cishe zibukeka wasenganekwaneni. Phela, kukhona yonke indawo inqwaba twinkling kwamalambu aluhlaza. Waitomo Caves ikhanyisa ngokhanyikhanyi amancane, elise vaults yabo.
EChina, obomvu lolwandle ngokuthi amaxhaphozi olubanzi, lona lisiza ikhaya Suede. Ngenxa esikhanyayo njengegazi luhlaza, ziba ekwindla, iyindawo esiyingqayizivele, futhi lethiwa.
Amasango eHayidese, Turkmenistan
Negesi wentaba Amasango Hogo kwangethusa ukubukeka ufaneleke ngokugcwele igama layo. Lokhu ubukhulu imbobo 68 m, kwamiswa ngo-1971, lapho uDerrick waseSoviet uwa obhalwini igesi yemvelo. Selokhu amasango esihogo akuyikunqamuka ukuba ashise.
KaDeveli Tower, USA
E Wyoming, kukhona omunye ezimbi kakhulu izimangaliso zemvelo Zomhlaba - kaDeveli Tower. I dwala ka wentaba-mlilo umsuka ukuphakama cishe 400 metres isibe iyisibusiso mbamba letimayelana nalesihloko Abadali Thriller American "Izigigaba Vala we Okwesithathu Uhlobo."
Wadi Rum idume le "Mars" landscape, engesiyo ngaphandle injabulo ukusetshenziswa abenzi mafilimu ovelele. Ngakho, amabhayisikobho ashisa izikhotha-sci-fi "Mars" yathathwa lapha.
Waklama namawashi ahlekisayo azure emihumeni blue zemabula ezibaziweyo amagagasi anamandla akwa glacial Lake Jikelele Carrera Isifundazwe iminyaka 6000. Manje jewel toothfish Alps idume njengenye yezindawo engavamile kunalo lonke eMhlabeni.
Basengozini yokuthi uma lina, usawoti marsh Salar de Uyuni esikhulu kunazo zonke emhlabeni uguqulwe ube isibuko elikhulu. Wambozwa amanzi, kuba pheze elingenalo isithela emkhathizwe, ngenxa yalokho kuba umbono kumnandi.
Akhiwe Arizona canyon surreal eyenziwe sandstone (isithombe esikhulu) kwamiswa izigidi zeminyaka bedle izikhukhula ezinkulu ezisheshayo futhi eziphephweni. Igama lakhe wanikezwa ngenxa yebala engavamile izindonga iyafana umbala wezinyamazane wendawo yokuqothulwa.
Umgede zinhlayiya eMexico
Ngaphansi idolobha Mexican Naik at a 300 m ukujula, kukhona umhume ne ngobukhulu selenitovymi zinhlayiya emhlabeni. Hlola indawo eyingqayizivele kunzima kakhulu. Ngemva lokushisa Umgede amakristalu ifinyelela 54-58 ° C.
Ambozwe utshani obuluhlaza limestone indunduma ngetulu kwetintfo esifundazweni Bohol, umthunzi ensundu lapho komile. Yingakho omunye ezikhangayo edume kunayo Philippines futhi uqambe Hills Chocolate.
Amafutha "Motul" - ukubuyekezwa. Amafutha "Motul": imicabango yabantu kanye nezeluleko abashayeli